Home Wararka Xildhibaan Sareedo oo markale dib loogu soo celiyay kursigeedii
Xildhibaan Sareedo oo markale dib loogu soo celiyay kursigeedii
Xildhibaan Sareedo Maxamed Cabdalla ayaa maanta mar kale dib loogu doortay kursigeeda aqalka hoose ee sumadiisu tahay hop154. Guddiga doorashada oo kursiga xildhibaan Sareedo ku celiyay doorasho kadib markii ay sheegeen in habraacii lagu doortay uu wax ka qaldanaa, ayaa haatan kusoo baxday doorasho aan la tartamin.
Nasteexo Maxamed Yuusuf oo kursigan kula qornayd xildhibaan Sareedo ayaa markii doorashada la gaaray ka tanaasushay tartanka, waxayna sidaas ku heshay dhammaan codadkii ergada doorashada ka qeyb galaysay. Guddiga doorashada heer federal ayaa dhowaan sii daayay labo kursi oo kamid ahaa saddex kursi oo la hakiyay oo lagasoo doortay Koonfur Galbeed.
Previous articleKaraash: Puntland Anigaa madaxweyne ka ah, Deni waa gudan waayey waajibkiisa
Next article20-Musharax ka badan oo isku soo taagay Doorashada Guddoonka Gollaha shacabka